ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ကြမည်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ကြမည်နည်း
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Nov 14, 2010 in News |4comments
သူဝှက်ကြီးတော့သူခိုး သူခိုးကြီးတော့ ဓားပြ ဓားပြကြီးတော့ သူပုန် သူပုန်ကြီးတော့ အစိုးရ ဖွတ်မိချောင်းဖြစ်မူ မြစ်ချမ်းသာခြင်းကင်းလတ္တံ့ ။ဘယ်သူက ဘယ်လို ဘာအတွေးအခေါ်နဲ့ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကတော့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သဘောပေါက်ပုံခြင်းကတော့ အဲ့ဘ်စလုပ်တလီ လုံးဝဥသုံ တူညီကြလိမ့်မည်မထင် မြန်မာ့စကားပုံ ဆိုတာကလည်း အခက်သား ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ အဓိပ္ပါယ်တွေက ခပ်များများရယ်။ အစိုးရဟူသည် အရဆိုး တယ်လို့ ပြောမလား ဘာမှ မမြဲတဲ့ ဤလောကထဲဝယ် မည်သူက နာမည်ပေးထားသည်ကို မသိနိုင်ခြင်းက ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စ မဟုတ်သော်လည်း လူထဲကလူ လူသားထဲက ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု သည်လည်း ပြည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တိုင်းရေးပြည်ရာ အကြောင်းတွင် ပြည်သူ့ အခွင့်ရေး တည်းဟူ၍သာ ပါဝင်ဆွေးနွေးလေသည်ဟု ရွာသူရွာသားများမှတ်သားကြလေကုန်။
စကားလုံးပေါင်းများမြောက်စွာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် အလိုရှိရသော်လည်း စာရေးခြင်းအတတ်၌ ထိုထို သူသူ တို့ ကဲ့သို့တတ်ကျွမ်းလိမ္မာခြင်းငှာ အထင်အရှားမရှိခြင်းနှင့် ရှစ်ဆယ်ဟူသော အသပြာထုပ်တွက် အားထုပ်၍ ခပ်ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရေးပါမည်။
လူထု၏အပြည့်ဝထောက်ခံမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင် အစိုးရ ဖြစ်လာမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်းဟူသော အမျိုးသမီးကြီးသည် သူဝှက် သူခိုး ဓားပြ သူပုန် စသည်တို့လုပ်ဆောင်ဘူး၏/မဘူး၏ ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပေ သို့ သော် သောင်းသောင်းဖြဖြ ထောက်ခံ ကုန်သော ပြည်သူတို့ ကို ကြည့်ရုံဖြင့်ပင် လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်ထိုက်၏ ဟု လွယ်လွယ်ပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် လွန်စွာရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ကုန်သော လူတစ်စုသည် သူမနှင့်တစ်ကွသော ပြည်သူတို့ ကို အကြီးအကျယ်နှိပ်စက်ကြလေကုန်ရာ ဦးခေါင်းမထောင်နိူင်အောင်လည်း ရှိကြကုန်ခြင်းနှင့်အတူ ယ္ခုတစ်ဖန် သူမပြန်လည်၍ လွတ်မြောက်အပြီးတွင် ဘာများဖြစ်မှာ ပါလိမ့်ဟူ၍ဟူ၍သာ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်(ဝါ) တစ်ယောက်တစ်မျိုး ပြောဆိုမြည်တမ်းနေကြကုန်လေသတည်း။
စာပေမတတ်သောကျွန်ုပ်သည် အရပ်စကားဖြင့်သာပြောပါအံ့ သူမ၏ မိန့် ခွန်းကို နားထောင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် တရားမျှတမှု့ လုံးဝ မရှိသော ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူများမှ လုံးဝ အသိမှတ်မပြုရန် ပြောပုံရသည် ( ပြည်သူလူထု စိတ်ထဲတွင်ရှိသည့် ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြောစေလိုကြောင်း) ထိုနေရာ၌ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ သူမသည်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းထက် တိုင်းရင်းသား တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး (ပင်လုံညီလာခံ) ကို စိတ်အားထက်သန်ပုံရသည်။ ဖက်ဒရယ်မူကို အတိအကျ ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ သို့သော် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဟူသော ဝေါဟာရ ကို အနည်းငယ်နားလည်သည့်အလျှောက် လူမျိုးပေါင်းဆုံတို့ ပြန့် နှံ့နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံများ အဖြစ်သို့မခွဲထွက်စေလိုသည်မှာလည်း ကျွန်ုပ်၏ ဆန္ဒဖြစ်သည်ဟု ရိုးသားစွာပြောခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တိုင်းရင်းသားများကို လုံးဝ လေးစားရပါမည်ဟုလည်း ဆိုခြင်ပါ၏။ (ထိုတိုင်းရင်းသားနေ့ များတွင် အစိုးရရုံးများ၌ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်၍ ရုံးအလုပ်ကို လုပ်ကြခြင်း) ထိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို နှိမ်နင်းခြင်းကပင် ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်ကြား သွေးကွဲစေသော ကြီးစွာသော အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဟူပါ၍ ပြောဆိုသူ နည်းသောကြောင့် ကျွန်ု၏ထင်မြင်ချက်သည် အရာရောက်မည်လည်း မထင်။ထိုအကြောင်းသည်ကပင် စစ်အာဏာရှင်တို့ ကို ခြေကုတ်ယူစေနိုင်သော အဓိက အကြောင်းဟူမူ၍ကျွန်ုပ်ပြောပါမူ မှားမည်လော။ အထူးသဖြင့် ယ္ခု ကျွန်ုပ်၏ ဓာတ်ပုံကြီးအား ညံ့ဖျင်းသည်ဟူ၍ စွပ်စွဲခြင်းသည် ကပင် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ လွန်စွာညံ့ဖျင်းကုန်သော အကြောင်းတစ်ခုဟု ပြောလိုပါသေးသည်။ သူ လုံးဝမညံ့ပါ မကြင်နာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သို့ သော် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားကြောင့် အသက်အရွယ်လည်းအဝင်ပါ သူသေသည့်ထိပြုမည်လည်း ထင်ရန်ခက်လှသေးသည် ( သူမွေးသောမျောက်များ သူ့ ကိုခြောက်နေဟန်ရှိသည်ဟုလည်းထင်မိပါသည်)
ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေအရ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းများ ထွန်းပေါက်လာပါက မြန်မာနှင့် ကိုဘားမားတို့ဆွေမျိုးဖြစ်မယ့်အရေးကို ပေါက်ဖော်ကြီးသည် လုံးဝအလိုမရှိနိုင်ခြင်းမှာ ပြောရန်မလိုပေ ယဉ်ကျေးမှု့ အရတော့ ကျွန်ုပ်မသိပါ ကိုဘားမားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေမျိုးစပ်ကြပါမူ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး နှင့် နည်းပညာများ ကို ကိုဘာမားတို့ သည် တရုတ်၏ အရှိန်ကို လျှော့ချပစ်ရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုကြမည်မှာမလွဲပေ ကိုဘားမားတို့ ကို ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအကြောင်းမှာ သူတို့ သည် ပြည်သူများကို အာဏာ ဂုဏ် ပကာသဏ ရူးပြီး သက်ဦးစံပိုင် လုပ်ခြင်သူများနှင့်မတူဘဲ အခွင့်အရေးနှင့် အတတ်ပညာများပေးကာ ဆရာလုပ်ခြင်ခြင်းမျှဖြစ်သည်။ ဆရာလာလုပ်သော်လည်း အာဏာရှင် လုံးဝ မဖြစ်လာပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အချုပ်ခြာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများတွင်ရှိသည်။( ဂျပန် ဗီယက်နာမ် စသည်) ထိုကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်ခြင်းကို အလိုမရှိသူမျာတွင် ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ စင်္ကာပူ တို့လည်း ပါဝင် လေကုန်၏။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည့် အစပထမမှာတိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်၏ ထိုတိုင်းရင်းသားများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သူဖျက်သနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဖျက်သနည်း။
အကယ်စင်စစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ များ အတော်တန်ထွက်သော ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် မီးအမှောင်ကျနေခြင်း။ ထို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများတွက် ပြည်သူ့အိုးအိမ်များဆုံးရှုံးခြင်း ရေအားလျှပ်စစ်များတွက် ပြည်သူများ ပေးဆပ်ရမှု့ ။ စီးပွားရေး အရင်းရှင်များမှ ပြည်သူ့ လယ်ယာများကို အဓမ္မ လုယူခြင်း။( ဘိုးဘွားပိုင်ဟူ၍ အမွေများလုကြပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အသိမ်းခံရသောအခါ ဘာမျှမတတ်နိုင်ခြင်း) ကျွန်ုပ်အထူးပြောခြင်သည်မှာ ထိုငြိမ်းချမ်းရေးတွက် သူမဆောင်ရွက်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့ သည် နောက်လိုက်ပီသရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြပါကုန်အံ့။ (မတရားသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သူမ၏ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းရေးကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ချဉ်းကပ်မည်နည်း။ အဘယ့်ကြောင့် အနာဂတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို သူမ မပြောသနည်း။ဤသည်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တာဝန်မဟုတ်ပါလော)
aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..
View all posts by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု →
ကဲလောလောဆယ်တော့ ..မိန့်ခွန်းသွားနားထောင်နိုင်ဖို့ … တင်ထားပေးပါတယ်..။
နောက်တခုက .. Politic > Aung San Suu Kyi ဆိုတဲ့ Category ခွဲထားပါတယ်။ နောင်ရက်တွေလည်းရှာလွယ်အောင်ပါ..။
မန်င်ဘာများ … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ အဲဒီ Category ဖက်မှာထားကြပါလို့..။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ကြမည်နည်းဆိုတော့ ကိုအောင်ပုက နိုင်ငံရေးလုပ် ကျနော်ကြောင်ကြီးက ထောင်မှူးလုပ်မယ်။
နအဖက ဒေါ်စုနဲ့အပေးယူတည့် ပျော့ပြောင်း လို. သူတို့နောင်ရေး လုံခြုံအေးချမ်း မယ်ယုံကြည်ချက်ရရင် ပြည်သူ့ကိုအာဏာအပ်မယ်ဆိုရင်တောင် တရုပ်ကဖျက်မှာပါ နောက်အဆိုးရလက်မှာ သူ ခိုးသမျှဆိုးသမျှပေါ်မှာကိုး မြောက်ကအေးဆေးပဲ သူက တသက်လုံး နာမည်ဆိုးနဲ့အထီးကျန် နေမြဲပဲ
တရုပ် က သာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် တစ် မှန်းနေတာ
သူ့စားခွက်ပျောက် မှာထက် သူ့ လက်နက်ရောင်းတာ ခိုးတာ ပေါ်မှာကြောက်တော့ဖျက်မှာပဲ
((((((((ထိုအကြောင်းသည်ကပင် စစ်အာဏာရှင်တို့ ကို ခြေကုတ်ယူစေနိုင်သော အဓိက အကြောင်းဟူမူ၍ကျွန်ုပ်ပြောပါမူ မှားမည်လော။
ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေအရ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းများ ထွန်းပေါက်လာပါက မြန်မာနှင့် ကိုဘားမားတို့ဆွေမျိုးဖြစ်မယ့်အရေးကို ပေါက်ဖော်ကြီးသည် လုံးဝအလိုမရှိနိုင်ခြင်းမှာ ပြောရန်မလိုပေ..)))))))
ဖြစ်ချင်တာတွေရယ်.. ဖြစ်သင့်တာတွေရယ်.. ဖြစ်ရမှာတွေရယ်..
တလွဲ လုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရယ်…
လုပ်ချင်တာ ကိုသာ ဇွတ်လုပ်နေကြတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများရယ်..
သောက်သုံးမကျတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက တရုတ်ဆီကနေ ပိုက်ဆံချေးတယ်..
အဲဒီ သောက်ကြွေးတွေက သောက်ပြဿနာတက်နေတယ်….
အဲဒီ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ပဲ ဖင်ခံရလိမ့်ဦးမယ်….
ကိုကြီးပု ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ.. ဘာလုပ်ကြမှာလဲ….
Shar Thet Man (74020 Kyats )